नेपालमा कोरोनाको कारण थप ५२ जनाकाे मृत्यु
ज्यानै जाने गरी हतियार प्रहार गरी धनमाल लुट्ने ३ जना पक्राउ
कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका सांसदले पनि मतदान गर्न पाउने
नेपालमा थप ८ हजार ८५० जनामा कोरोना पुष्टि
अक्सिजन सहज उपलब्ध गराउनका लागि कार्यदल गठन
अवैध सुनका गरगहनासहित एक भारतीय पक्राउ
काठमाडौं । बाराबाट प्रहरील २५ ग्राम अवैध सुनका गरगहनासहित एक भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा भारत बिहार मोतिहारी जिल्ला झारना ग्राम वडा नं ३ बस्ने जोखन साह सोनारको छोरा जितेन्द्र साह सोनार रहेका छन् ।
भदौदेखि हरियो स्टिकर बिनाका गाडी बन्द
काठमाडौं । तपाईंले गाडीको इन्जिन चेकजाँच गराउनुभएको छैन ? वा चेकजाँच गराएर पनि ‘हरियो स्टिकर’ लगाउनुभएको छैन ? सावधान, सरकारले त्यस्ता गाडीलाई भदौदेखि पूर्णरूपमा बन्देज लगाउने भएको छ ।